Maxaad Ka Taqanaa Waddanka Koonfur Afirka???
Marka la rabo in laga hadlo wadan waxa waajib ah in la xuso taariikhda uu leeyhay wadankaasi .
Hadii aan ka bilaabo si guud ahaneed Taariikhda waddanka oo kooban koonfur Afrika ah. Waa waddan muddo dheer ku kadeedmay midab kala sooc aad u xun,kaasoo ka markhaati kacaya heerka qaabka daran ee uu gaadho damaca iyo sadbursiga Ina Aadane qaarkii uu walaalkii kula kaco.Waddanka koonfur Afrika waxa uu ku dhacaa cidhifka ugu koonfureeya qaaradda Afrika, waxaana koonfurta galbeed kaga beegan badwaynta Atlaantiga oo dhererka xeebtiisu ay gaadho 872 km, dhinaca waqooyi barina waxaa kaga xeeran badwaynta Hindiya, waqooyina waxaa ka xiga Musambiik,Zimbabwe,Botswana iyo Namibiya. Bedka waddanku waa 1220037 km (hal milyan 220 kun iyo 37 km) oo isku wareeg ah. Caasimadda waddanku waa Pretoria, magaalooyinka waawayna waxaa ka mid ah Capetown, Johannesburg iyo Durban. Tirada dadka waddanka ku dhaqan waxaa lagu qiyaasaa 41 milyan oo qof, tirada dadka madawga ahina waa 75% tirada guud ee dadka waddanka ku dhaqan, caddaanka wadaanka ku dhaqanina waa 14%, dadka Aasiyaanka ahina waa 11%.
Waddankaasi intii uu ka jiray nidaamka midabtakoorka ahi waxa uu keenay in dadka cad oo aad u yari ay ku kaliyaystaan hoggaaminta waddanka ee siyaasadeed iyo dhaqaalaba, waxay dageen meelahii ugu quruxda badnaa, waxayna gacanta ku dhigeen dhammaan ilihii dhaqaalaha, sida ka ganacsiga hubka iyo qodista dahabka iyo dheemanka. Haddaba inkastoo hoggaamintii siyaasadeed ay gacanta ugu jirtay dadka madaw ee waddanka u badan labaatameeyadii sano ee ugu dambeeyay, haddana marka aad hoos ugu sii dhabbo gasho waxaad dareemaysaa in uu weli ninka caddaa daaha dabadiisa ka hoggaaminayo waddanka, waayo weli ilihii dhaqaaluhu isagay gacnta ugu jiraan dadka madawga ahina kaalinta hadalka iyo siyaasadda ayay weli ku jeedaan.
Sidee buu Islaamku ku gaadhay waddanka koonfur Afrika
Islaamku wuxuu gaadhay sanadkii 1694kii, waagaas oo ay xeebaha waddankaasi ku soo xidhatay doon la odhan jiray De Fotopogh, doonidaasi oo sidday 49 muslimiin ah oo ay dawladda Holland u soo musaafurisay waddanka koonfur Afrika, dadkaasoo ka mid ahaa dagaalyahannadii muslimiinta ahaa ee ka dagaalami jiray waddanka Indooniisiya, lana dagaalami jiray gumaysigii Hollandiiska ahaa ee waddankooda haystay waagaas, dadkii ugu magaca dheeraa ee doontaas la socdayna waxaa ka midaa nin lagu magacaabi jiray Abu Islaam oo ila hadda magaciisa la sii yaqaanno.
Qaybaha ay u kala baxdo Jaaliyadda Muslimiinta ee Koonfur Afrika
Jaaliyadda muslimiinta ah ee ku dhaqan waddanka koonfur Afrika waxaay u kala baxdaa saddex qaybood oo kala ah:
1- Waana qaybta ugu balaadhan uguna soo horraysay imaatin ahaan waddanka koonfur Afrika, waxayna asal ahaan ka soo jeedaan Indooniisiyaan iyo Maleesiyaan. Dadkaas oo qaarkood uu addoon ahaan ku keenay gumaysigii Hollandiiska ahaa ee waddamadooda gumaysan jiray si ay uga shaqeeyaan beeraha caddaanku ay waddanka koonfur Afrika ku lahaayeen iyo qaar kale oo siyaasad ahaan loo soo musaafurin jiray, waxayna dadkaasi badidoodu deggan yihiin magaalada Capetown iyo hareeraheeda, markii dambana waxay badankoodu noqdeen shaqaale dawladeed,waxayna raacsan yihiin Madhabka Shaaficiga, tiradooduna waxay kor u dhaaftaa 300 oo kun oo qof. Waxay ku guulaystaan inay ilaashadaan astaamahoodii muslinimo, isla markaana ay masaajido ka dhisaan degaankooda, waxayna ku guulaystaan inay xidhiidh fiican la yeeshaan dadka asal ahaan waddanka loogu yimid.
2-Waa dadka ka soo jeeda Hindi, dadkaasoo uu gumaysigii Ingiriisku badiba shaqaale ahaan u keensan jiray, waxayna badi degen yihiin gobolka KwaZulu-Nata iyo magaalada Johannesburg, badidooduna bulshada waddanka waxay ka noqonayaan dabaqadda dhexe marka la eego xagga dhaqaalaha iyagoo ku soo xiga dadka cad ee dhaqaalaha waddanku gacanta ugu jiro. Dadkaasi badidooduna waxay raacsan yihiin Madhabka Xanafiga ah.Dadkan oo iyagu u jeestay xagga ganacsiga waxay ku guulaysteen inay ilaashadaan astaamahoodii muslinimo, iyagoo dhinaca kalana ka dhisay degaanka ay deggen yihiin masaajido waawayn iyo dugsiyo u gaar ah, waxay kaloo samaysteen jaaliyado iyo ururo xoog leh, iyagoo ku guulaystay inay faqiirkooda caawiyaan, sakooyinkoodana iska ururiyaan. Hase yeeshee qaybtani waxay si aad ah uga gaabisay faafitaanka diinta Islaamka iyo sidii ay diinta Ilaahay u gaadhsiin lahaayeen dadka madaw ee waddanka ugu badan, waxabana jirta xurguf aad u ballaadhan oo ka dhaxaysa dadka madaw iyo muslimiinta Hindida, taasoo keeni karta haddii aanay muslimiinta Hindidu qaab nololeedkooda wax ka beddelin cidhib xumo saamaysa dhammaan bulshooyinka muslimiinta.
3-Waa qaybta ugu yar tiro ahaan waxayna iskugu jiraan dadka madaw ee asal ahaan degaanka loogu yimid iyo dadka waddanka looga yaqaanay dadka iska dhalka ah, waxaana qaybtaasi soo galaya dadka Soomaalida ah, kooxdii ugu horraysayna waxay waddankaasi gaadhay horraanta qarnigii tagay waxayna dhammaayeen 400 oo qof oo uu gumaysigii Ingiriisku ka keenay maxmiyaddii Ingiriiska ee Somaliland, una badnaa shaqaale taararka ka shaqeeya iyo karaaniyaal,haddaba dadkaasi oo dhammaantood wada dhallinyaro ahaa ayaa milmay oo maanta qof qof mooyaane aan waxaba laga hayn , waxaa ka sii hadhay guryihii ay lahaayeen oo mid waliba uu ku qortay qabiilkiisii hoose iyo magaaladii uu ka yimid, xattaa waxaad arkaysaa Hindi Siikh ah oo ku leh waxaan ahay asal ahaan Soomaali. Qaybta labaad ee Soomaaliduna waxay waddankaasi tageen bilawga sagaashameeyadii qarnigii dhammaaday markii ay ka qaxeen dagaaladii halkeeyay Soomaaliya iyagoo badidoodu uga guuray xagga waddanka Kenya, inkastoo ay haddaba Soomaalidan dambe ee waddankaasi tagtay ay ka nasiib fiican yihiin kooxdii hore haddana dhibaatada hayasataa ma yara.
Dhibaatooyinka haysta muslimiinta koonfur Afrika
Kaddib markii uu burburay nidaamkii midabtakoorka ee xumaa waxaa dhacday in dad fara badan oo u badan dadka maalqabeenka ahi ay ka guuraan degaankii markii hore ay deggenaayeen iyo masaajidada hareerahoodii, iyagoo u guuray meelo fogfog oo markii hore dadka cad u gaar ahaa, taasoo keentay inuu hoos u dhaco wacyigii iyo isku xidhnaantii dadka muslimiinta ah ka dhaxeeyay, waxaana samaysmay fac ay ku yar yihiin dhaqankii astaamihii diintu. Dhinaca kalana kaddib markii uu xidhiidhka muslimiinta waddankaasi ay la lahaayeen dunida muslinka waxaa timid cabsi ah in khilaafaadka madhabiga ah iyo ka siyaasiga ah ee dunida muslinta halkeeyay uu u soo gudbo bulshowaynta muslimiinta ee ku dhaqan koonfur Afrika taasoo raad aan la mahadin ku yeelan karta.
Wadaankaan koonfur Afrika waxaa looga hadlaa sida la sheegey ilaa 11 luqadood waxana ka mid ah
Sepedi, Sesotho, Setswana, siSwati, Tshivenda, Xitsonga, Afrikaans, English, isiNdebele, isiXhosa iyo isiZulu.
Wadaankaan koonfur Afrika waxa uu leeyahay 11 Magac oo ah Official Name of South Africa.. waxana ka mid ah
Riphabuá¸½iki ya Afurika Tshipembe (Tshivenda)
Wadaankaan koonfur Afrika waxa uu ka kooban yahay 9 gobal
Province Former homelands and provinces Capital Area (kmÂ²) Area (miÂ²) Population (2001)
Eastern Cape Cape Province, Transkei, Ciskei Bhisho 169 580 65 475 6 436 761
Total 1 219 080 470
Wadaan kani waxa uu ku caan baxay dhaqaalaha iyo dalxiiska waxaana u leeyahay Kogob dhaqaale oo xoogle Meelaha Ugu Weyn ee uu dhaqalaha ka so galo waxa ugu muhiimsan dalxiiska Rankiga aduunkana waxay kaga Jirtaa Wadanka 24 aad waxana u ka mid yahay ama ka dhihi kara waa hormuudka wadana so kuroaayo dhaqaalahooda Magaalooyinka Caanka ku ah hormarka wadanka waxaa ka mid ah Cape Town, Port Elizabeth, Durban, iyo Pretoria/Johannesburg. Xarunta dhaqaalaha ee wadankuna waa Johannesburg.
Hadaba Anigoo So gabagabeynaayo Hadalkeyga Waxaan dhihi karaa Wadaankaan koonfur Afrika Waa wadan ka kaliye ee uu ka jiro dhaqaalo xor ah aadna ku arkeysid meelo badan
Ka Daawo hoos Sawirad qaarka ka tarjumaayo xiligii guumeystaha iyo dadka daga waddaankaan iyo meelaha Ugu bilcsan Wadaankaan koonfur Afrika
+ 27 76 969 9516
+ 27 11 837 0891